၂၀၀၇ခုနှစ်၊ စက်တင်္ဘာလတွင် သမိုင်းမှာအထူးခြားဆုံး မော်ကွန်းတင်ကျန်ရစ်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းတော်လှန်ရေးကြီး၏ ၂နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းနားကို နယူးဒေလီမြို့၊ ရွှေဝါရောင် ကျောင်းတိုက်ရှိ ဆရာတော်သံဃာတော်များနှင့် ချင်းကျောင်းသား လူငယ်များသမဂ္ဂတို့မှ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီး၏ ပုံရိပ်များကို slide show ဖြင့် ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် ဆရာတော်များကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံများကို ဟောပြောသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ နယူဒေလီရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး တက်ရောက်အားပေးကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ။ ။ ၀၅-၀၉-၂၀၀၉
အချိန် ။ ။ ညနေ (၆၀း ၃၀) နာရီ
နေရာ ။ ။ မြန်မာ့ရိပ်သာခန်းမ (BCRC)
ဆက်သွယ်ရန်- 9818938293/ 9871210340
In the month of September 2007, one of the greatest historical events occurred in Burma.
The commemoration of the 2nd anniversary of the above mentioned Saffron Revolution (aka) September Movement will be jointly organized with slide show by the New Delhi based Saffron Monastery the Chin Students & Youth Federation (CSYF).
The monks who took leadership parts in the movement themselves will attend and share their activities of the then Saffron Revolution.
We, therefore request all ethnic brothers and sisters to attend the program at the below mentioned place and time.
Date: September 05, 2009 (Saturday)
Place: BCRC Hall
Saffron Monastery; 9818938293
Kan ram thuanthuih ni thupi zet, mipi le phungki pawl lungrualih raalkap uknak an dokalh mi, kum 2007 September cangvaihnak thawn pehparin, Chin Tlawngtaa & Mino Pawlkwm (CSYF) ih tawlrelnak thawngin,atanglamih tarlanmi hmun le ticu ah zuknungih hmuh asi ding. Hi’h ni ahhin, September cangvaih-nak neih `umih mah rori rak tel phungki pawlin, an twnhmuhmi pawl an simfiang phah ding.
Kan ram thuanthu zohkir sal tikah, Chinmi pawl kan tel lawngah kan ramahim `heu. New Delhi ahhin, Chinmi kan tam bik nan, ram tundin salnak ding hrangih cangvaihnak ahhin, mino nang le keiin tu hnakih taimak suah sin tum cio uhsi.
a&$0ga&mifausmif;wdkuf/ New Delhi
Chin Students & Youth Federation (CSYF-Ctr)
A Ni: : 05, 09, 09 (September Ni 5, Kum 2009- Zarhte Zaan)
A Caan: : Tlailam Nazi 6:30 Thawk ding
A Hmun: : Burmese Community Resource Center (BCRC)
Suhhlamnak: : (U. Thavara)- 9818938293 & (CSYF)- 9871210340